Yakatumirwa ne Tranquillus | 21 Sea, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kushandisa runyorwa rwemabara kunogona kukosha mukuvandudza kuverenga kwechinyorwa uye nekuita kuti zvive nyore kunzwisisa. Nekudaro, inowanzo shandiswa kana iyo ndima yakanyanyisa kuomarara kana kureba. Aya ndiwo maratidziro ainoita iwe kunyora mamiriro, rondedzero mienzaniso, nezvimwe. Ipapo ndipo panomuka dambudziko rekushandisa kwayo. Nyora nyora nemitemo yese inofanirwa kutariswa kuti inyatsoiswa zvinofanirwa kuzivikanwa.
Chii chinonzi chip?
Bara bara chiratidzo chinokuzivisa iwe kuti urikufamba kubva kune chimwe chinhu kana boka rezvinhu uchienda pane chimwe. Isu tinosiyanisa mabara akaverengwa uye mamwe asiri iwo. Dzakare dzinodaidzwa zvakare kuti mabara akarayirwa uye echipiri mabara asina kuodha.
Mune rondedzero isina kumisikidzwa, ndima yega yega inotanga nebara. Nguva refu yapfuura chip chakaderedzwa kusvika padash, asi nhasi akawanda magadzirirwo aunogona, mamwe akasvinura kupfuura mamwe. Mune runyorwa rwemabara runyorwa, nhamba kana tsamba inofanirwa kutungamira bara riri mubvunzo.
Kazhinji, iyo yakarongwa bullet rondedzero inoshandiswa kusimbisa iwo marongero enumeration. Semuenzaniso, kana nhamba ine mabara yakanyorwa ichinyora mamiriro anofanirwa kusangana kuti uwane faira, haugone kutanga nechero mamiriro. Kune rimwe divi, kana iyo rondedzero isina kurairwa, zvinofungidzirwa kuti zvese zvinhu zvinochinjika. Dzimwe nguva zvinhu zvakaita sekurongwa kwearufabheti zvinoshandiswa kuzvinyora.
Rondedzero yemabara inotevera pfungwa dzinoonekwa. Naizvozvo, zvinofanirwa kuve zvinonakidza kuona uye pamusoro pezvose zvinoenderana. Izvi ndezvechokwadi kunyangwe kune asina kunyorerwa bullet runyorwa. Kugadzikana kune hukama nezvezvinhu zvakasarudzika senge kushandiswa kwemhando imwechete yebara muchiverengero, mashandisiro emabhaisikopu akafanana uye nesarudzo yemataurirwo akafanana. Chokwadi, haugone kushandisa nguva yezvimwe zvinhu nemakoma zvevamwe. Izvo zvakakoshawo kuzivisa rondedzero ine chiziviso mutsara uyo unokanganiswa nekoloni.
VERENGA Kana chiso nechiso chiri nani pane email
Iyo inogara iri mune ino pfungwa yekuona kubatana kuti iwe haugone kushandisa mitsara yeakasiyana fomu kana yenguva dzakasiyana. Iwe zvakare haugone kusanganisa mazita nemazwi mune asingagumi. Imwe nzira yekunyepedzera ndeyekufarira zviito zvechiito kukuvadza zviito zvehurumende.
Nyatso nyora zvakanaka
Iwe une sarudzo pakati pezviratidzo zvinoverengeka. Chete, uchafanirwa kuona kusagadzikana. Aya ndiwo mashandisiro aunofanira kushandisa mavara makuru kune imwe neimwe fungidziro kana iwe ukaisa nguva yechinhu chimwe nechimwe. Kana iwe ukasarudza komma kana semicolon, unofanirwa kushandisa mabhii madiki mushure mega bara uye woisa nguva kumagumo. Saka iwe unotanga chirevo chitsva nemavara makuru kuti uenderere mberi nendima kana kutanga chikamu chitsva.
Muchidimbu, kana runyorwa rwakabvumidza muverengi kuve nezviratidziro murugwaro rurefu, zvinogona kunge zvisingaenderane nekusaremekedza mimwe mitemo kunze kwekunge kuverenga kuchikanganiswa.
Bulleted runyorwa uye kuverenga Kurume 24th, 2021Tranquillus
pashureMaitiro ekunyora uye nzira dzekuverenga
zvinoteveraKudzingwa uye mamiriro ezvinhu anoshungurudza: mushandi wako anogona here kukumbira kukuvara kunyangwe mhosva yacho ichiruramiswa?
Nzira yekuvandudza sei chikamu chekunyora kwako kubasa?
Master zvemukati uye fomu mune ako zvinyorwa
Yakajairika fomula ine hunhu kazhinji ine zvinhu zvina